Maqal: Puntland oo Sheegtay in aanay Mamnuucin Lacagta Shiling Somalia ah – SBC
Maqal: Puntland oo Sheegtay in aanay Mamnuucin Lacagta Shiling Somalia ah
Wasiir ku xigeenka Wasaarada Maaliyada Puntland Cabdi Ibraahim Warsame Qordhan ayaa maanta shir Jaraa’id uu ku qabtay Xafiiskiisa magaalada Garoowe ayaa sheegay in Puntland aysan diidin isticmaalka lacagta Shiling Soomaali ah gaar ahaan Shanta Boqol oo maalmahan Buuq ka taagnaa Suuqyada Puntland ka dib markii Ganacsatadu Diiday .
“Waxaan idiin sheegayaa oo halkan ka cadeynayaa in dowladu aysan didin lacagta Shiling Soomaaliga Ahi in lagu bixiyo oo lagu qaado Canshuurta, Miisaaniyada dalka ayaa Doolar loo rogay oo lagu qaadayaa Canshuuraha cidii Shiling Soomaali heysatana waa loo fasaxay Fursad baana la siiyay” ayuu hadalkiisa ku yiri Wasiir kux igeenka Maalliyada Puntland.
Sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in dowladu aysan aqbali doonin in la joojiyo lacagta dalka ka shaqeysa isagoona ganacsatada uga digay in ay lacagtaasi hor istaagaan .
“Waxana u sheegeynaa dadka lacagaha ka ganacsada iyo Ganacsatadaba in aan la aqbali doonin cid lacagta is hortaag ku sameysa, Ciidamada Amaanka iyo Bangiga dowlada waxaan ku wargelinayaa in talaaba adag ay ka qaadaan ” waxaa markale sidaasi yiri Wasiir kuxigeenka wasaarada Maaliyada Puntland.
Dhageyso Warbxiin ku saabsan Warkan oo uu ka diyaariyay Wariye Maxamed Siciid Yuusuf.DHAGEYSO
Sikastaba ha ahatee Maalmihii la soo dhaafay ayaa mar qura waxaa istaagtay shaqadii lacagta Shanta boqol iyadoo ganacsatada suuqyada waaweyn ee Puntland diidmo ka sameeyeen inkastoo iminka ay ka hadleen masuuliyiin ka tirsan Puntland.